POSTE DE POLICE AVANCE ANTANIAVO :MPANGALATRA MOTO TRATRA » Police Nationale
« COMMISSARIAT CENTRAL ANTSIRABE
CALENDRIER DE CELEBRATION DU XEME ANNIVERSAIRE DE LA DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECHERCHE »
POSTE DE POLICE AVANCE ANTANIAVO :MPANGALATRA MOTO TRATRA
Lehilahy miisa 06 no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny PPA ANTANIAVO ny alin’ny sabotsy hifoha alahady faha 05 may 2019 teny amin’ny faritra Ankazomanga sy ny manodidina iny noho ny antony fanendahana ary nahazoan’izy ireo moto.
Tokony ho tamin’ny 02 ora no nisy olona tonga nitaraina tao amin’ny paositry ny Polisy Antaniavo, nilaza ilay mpitory fa nisy lehilahy 03 nanendaka azy raha vao nidina tamin’ny fiara mpanatitra azy izy. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny Polisy nijery ny zava-nisy ka mbola tratra teo tokoa ireo 03 lahy voalaza fa nanendaka.
Vantany vao nahita ny Polisy ireto farany dia nitsoaka avy hatrany. Raikitra ny fifanenjehana ka lehilahy 01 no tratra. Tamin’izay fotoana izay ihany koa no nisy olona 01 hafa nanantona ny Polisy ary nilaza fa voahendaka tsy lavitra teo koa, ary lasan’ireo jiolahy ny moto routier TVS 125 CC mitentina 30.000.000Fmg izay nentiny.
Manodidina ny 07 izany ireo mpanendaka ireo ary antsy lava sy Big Boss no fitaovana ampiasainy handrahonana ireo olona endahiny.
Natomboka avy hatrany ny fikarohana, ka taorian’ny famotorana ilay voasambotra no nahafahana nisambotra ireo namany 05 hafa teny Ankorondrano Andranomahery ny 05 may 2019. Mbola tratra tao an-tranon’ny 01 tamin’izy 05 lahy voasambotra ireto ilay moto vao avy nendahin’izy ireo. Fantatra ihany koa fa efa nifonja ary vao nivoaka tamin’ity taona 2019 ity ny sasany amin’izy ireo. Efa tafaverina tamin’ny tompony io moto io.
Natolotra ny Fampanoavana ny alatsinainy 06 may 2019 izy ireo no hazonina vonjy maika eny am-ponja.
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=12934